स्वास्थ्य-जीवनशैली::Nepal's Online News Portal
एजेन्सी–साधारणतः हाम्रा भोजहरुमा एक अतिरिक्त पेयको रुपमा रक्सी या भनौं मादक पदार्थको प्रयोग गरिन्छ । कतिले आज एक दिन त हो नी भनेर पिउन शुरु गर्छन् । र यस्तो कालान्तरसम्म पुग्छ ।तर स्वयम रक्सी...
बढी शुल्कमा बेच्नकै लागि प्रतिष्ठान पदाधिकारीको मिलेमतोमा चलखेल भएपछी चिकित्सकहरु ७२ घण्टाभित्र नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन विपरीत सरकारकै संस्था बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपीकेआइएसएच)ले एमडी/एमएसको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तोकिएको कोटाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने ऐनको प्राब्धानविपरीत विदेशी विद्यार्थीका लागि...
देशभरको मौसम बदली हुने हुदा सबैमा सचेत रहन मौसमविदको आग्रह !
काठमाडौं, ९ असार । पूर्वबाट चार दिनअघि नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन पश्चिम क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । देशका पश्चिम क्षेत्रमा आइतबार बेलुका तिरै मनसुन पुगेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अब बिस्तारै...
औषधिको तर्कहीन प्रयोग नै रोगको तेस्रो कारण , बच्ने कसरी ?
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि औषधिको ५० प्रतिशतसम्म प्रयोग तर्कहीन वा विवेकहीन रूपमा हुने गरेको छ । कुल औषधि प्रयोगको आधा मात्र रोगअनुसारको आवश्यकतामा हुने गरेको तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमा औषधिले...
यस्ता छन् दैनिक गोलभेडा खानुका अपत्यारिला फाईदा ; क्यान्सर ,हृदयाघातजस्ता प्राणघातक रोगबाट मुक्ति
गोलभेँडा नेपालमा मात्र नभई दुनियाँका धेरैजसो देशमा खाइने तरकारी हो । नेपालमा आम रूपमा तरकारीलाई ग्रेबी बनाउन परिकारमा तिखो स्वाद ल्याउन गोलभेँडाको प्रयोग गरिन्छ । टोम्याटो सस त तपाईंले पनि खुब खानुभएको होला, तर...
आज सम्म सोच्न पनि नसकेको बिहान खाली पेट पानी पिउनुका ९ आश्चर्यजनक फाइदा
एजेन्सी- पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा...
के तपाई आफ्नो आयु बढाउन चाहानुहुन्छ ? जन्नुहोस यी तथ्य
एजेन्सी– पढ्ने बानीले मानिसको आयु बढ्ने कुरा नयाँ अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । सोसियल साइन्स एन्ड मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक नयाँ अध्ययनले पुस्तक पढ्ने मानिसहरु नपढ्नेभन्दा बढी बाँच्ने पत्ता लगाएको छ । अमेरिकाको एल...
श्रीमान विदेशको मरुभूमिमा ! श्रीमतीको मस्ती अबैध रुपमा बोकेका पेट गर्भपतन गराउदै
काठमाडौं । र्दशन नेपालका अनुसार स्याङ्जा जिल्लामा बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढदै गएको छ । नेपालको कानूनमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । तर बिहे गर्ने उमेर अगावै...